Bit By Bit - Ukuqaphela ukuziphatha - 2.3.2.6 Dirty
Imithombo idatha Big lingalayishwa nge okungenamsoco spam.
Abanye abacwaningi bakholelwa ukuthi big idatha imithombo, ikakhulukazi labo abavela imithombo online, kukhona acwebile ngoba ziqoqwa ngokuzenzakalelayo. Eqinisweni, abantu abasebenze big imithombo idatha zazi ukuthi zingabantu njalo ezingcolile. Okusho ukuthi njalo zihlanganisa idatha engahambisani izenzo yangempela of interest abacwaningi. Ososayensi abaningi social sebekujwayele inqubo wokuhlanza emikhulu zedathamininikwane social, kodwa ukuhlanza big imithombo idatha nzima nakakhulu ngenxa yezizathu ezimbili: 1) ayengakhishwa owadalwa abacwaningi ivulela abacwaningi kanye 2) abacwaningi ngokuvamile ube nokuqonda kancane yendlela bedalwa.
Nezingozi dirty idatha trace digital efanekiselwa Emuva kanye nozakwabo ' (2010) Ucwaningo lwe-imizwelo ekuhlaseleni September 11, 2001. Abacwaningi ngokuvamile siqhuba isifundo aphendvula izenzakalo ezishaqisayo usebenzisa idatha zokuhlola eqoqwe phezu izinyanga noma ngisho neminyaka. Kodwa, Emuva kanye nozakwabo bathola imilayezo njalo-on umthombo digital iminonjana-the timestamped, aqoshiwe nge-othomathikhi avela 85.000 American ama-futhi lokhu inikwe amandla abacwaningi ukutadisha imizwelo on a esikaliwe okuningi kakhulu. Emuva kanye nozakwabo wadala a timeline ngomzuzu-by-minute okungokomzwelo okwakubangelwa September 11 by esephepheni okuqukethwe ngokomzwelo imiyalezo pager ngephesenti lamagama ahlobene (1) nokudabuka (isib, ekhala, usizi), (2) ukukhathazeka (isib, ukhathazekile, esabekayo), kanye (3) intukuthelo (isib, inzondo, esibucayi). Bathola ukuthi ukudabuka nokukhathazeka likhuphuka phakathi nosuku iyahlukahluka oqinile, kodwa ukuthi kwakukhona nokwanda yesiteleka ngentukuthelo usuku lonke. Lokhu kubonakala sengathi ucwaningo umfanekiso emangalisayo amandla njalo-on imithombo idatha: besebenzisa izindlela standard bekungeke kwenzeke ukuba abe umugqa wesikhathi enjalo eliphezulu isinqumo nampendulo esheshayo kwenzeka isenzakalo esingalindelekile esashintsha.
Nokho, nje konyaka, Cynthia Pury (2011) wambuka idatha ngokucophelela. Yena wathola ukuthi inombolo enkulu izigijimi Kutsiwa kusuke ethukuthele evelile ngumuntu pager olulodwa bonke babe ezifanayo. Nakhu lezo zigijimi Kutsiwa kusuke ethukuthele yathi:
"Umshini kabusha NT [igama] e iKhabhinethi [igama] kokuthi [indawo]: EZINZIMA: [usuku nesikhathi]"
Le miyalezo zibhalwe angry ngoba yayihlanganisa negama elithi 'EZINZIMA', okungase ngokuvamile kubonise ukuthukuthela kodwa asipheli kuleli cala. Ukususa imiyalezo ekhiqizwa yilesi pager single ezenzekelayo aqede ngokuphelele ukwenyuka kwezinga lalezi ngentukuthelo phakathi kosuku (Figure 2.2). Ngamanye amazwi, umphumela lomcoka Back, Küfner, and Egloff (2010) kwaba i mshini womunye yepheyija. Njengoba lesi sibonelo sibonisa, analysis elula kwedatha eyinkimbinkimbi futhi zingcolile unakho ukuya kahle ngempela.
Umfanekiso 2.2: izitayela elinganiselwayo ngentukuthelo phakathi September 11, 2001 esekelwe 85,000 ama American (Back, Küfner, and Egloff 2010; Pury 2011; Back, Küfner, and Egloff 2011) . Ekuqaleni, Back, Küfner, and Egloff (2010) ibike iphethini okwandayo intukuthelo usuku lonke. Nokho, iningi le miyalezo sobala angry evelile by pager elilodwa ngokuphindaphindiwe ethuma lo myalezo olandelayo: "Qala kabusha NT umshini [igama] e iKhabhinethi [igama] kokuthi [indawo]: EZINZIMA: [usuku nesikhathi]". With lo mlayezo isuswe, ukwenyuka kwezinga lalezi ngentukuthelo ubalekela (Pury 2011; Back, Küfner, and Egloff 2011) . Lesi sibalo kabusha Fig 1B ngo Pury (2011) .
Yize ulwazi ezingcolile is wadala ungahlosile-ezifana kusukela komunye enomsindo pager-kungatholakala by umcwaningi okunengqondo ngokucophelela, kukhona ezinye izinhlelo online ezithatha angadingeki sangamabomu. Lezi angadingeki ngenkuthalo zikhiphe idatha fake, futhi-ngokuvamile abashukunyiswa inzuzo-sisebenze kanzima ukuze bagcine ukugaxela yabo ezifihlakele. Ngokwesibonelo, umsebenzi ezombusazwe on Twitter kubonakala ukuze ihlanganise okungenani spam ezinye okunengqondo eyindida whereby ezinye izimbangela yezombusazwe ngamabomu wenza ukubheka ethandwa ngaphezu kwazo uqobo kukhona (Ratkiewicz et al. 2011) . Abacwaningi ekusebenteni ngedatha engaqukatha ugaxekile ngabomu ibhekane nenselele yokusingatha obukholisayo izilaleli zabo ukuthi ziye sitholakale isuswe spam efanele.
Ekugcineni, ngalokho okubhekwa idatha ezingcolile bathembele ngezindlela ezicashile imibuzo yakho ucwaningo. Ngokwesibonelo, ukuhlela abaningi Wikipedia adalwe bot ezenzekelayo (Geiger 2014) . Uma unesithakazelo emvelweni Wikipedia, khona-ke lezi bot zibalulekile. Kodwa, uma kukhona onesithakazelo kanjani abantu neqhaza Wikipedia, lokhu kuhlela ezenziwa yilaba bot kufanele indiva.
Enye yezindlela ezingcono kakhulu ukuze sigweme yileyo idatha ezingcolile yizona ukuba baqonde indlela idatha yakho adalwe ukwenza analysis elula ngokuhlola, ezifana nokwenza elula chitha iziza.